Igumbi lokulala + igaraji! Indlela ephezulu elandelayo/iziko/indawo yokuthenga - I-Airbnb
Igumbi lokulala + igaraji! Indlela ephezulu elandelayo/iziko/indawo yokuthenga
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguBrenda
Ngamaxesha obhubhane yithathe ngokuba yindawo ekhuselekileyo. Bonke abantu abayi-3 abahlala endlwini basebenza ngokukhuseleka okukhulu, ukongezelela ekuqinisekiseni ukuba umgangatho wococeko uyadingeka ukuze bakhuseleke.
Indawo entle kwabo bezayo ukuze bahambe baze basebenze. Le ndawo ikufutshane neCariri Garden Shopping, iRagoviária, iBank neBhanki i-24hrs, iZiko Lokuthenga lesixeko, phakathi kwezinye. Ukongezelela kwiigaraji ezinamagumbi aliqela, isenokuquka iimoto ezinkulu
Le ndawo iquka inethiwekhi ye-Wi-Fi, igumbi lokuhlala (isofa kunye neTV), ikhitshi (ifriji, isitovu, i-toaster, i-Blender, i-Mixer, amanzi acocekileyo eendwendwe, njl.) kunye nendawo yenkonzo esetyenziswa nangabanye abantu (umatshini wokuhlamba impahla kunye nezinto zokucoca ngokubanzi). Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, izinto zebhedi, iitawuli kunye nesepha ziyafumaneka kweli gumbi. Ime kwisithili sesibini sikamasipala, kufutshane neCariri Garden Shopping, iibhanki, iivenkile zokutyela, isikhululo sebhasi, kufutshane neendlela ezilula zokuya kwisikhululo seenqwelo-moya.
Iindawo Ezikhuselekileyo Nentsapho.
Iindawo ezikufutshane zithi cwaka kwaye zitofotofo kakhulu. Uninzi lwabahlali ziintsapho eziye zahlala kule ndawo iminyaka engaphezu kweyi-20. Kukho ukhuseleko kunye nokuthembana phakathi kwabantu basekuhlaleni. Ukongezelela ekubeni nabathengisi, iivenkile zezinto ezibhakiweyo, iivenkile zokutyela kunye neepizzerias kunye neevenkile ezinkulu kufutshane nendawo ohlala kuyo.
Umbuki zindwendwe uza kufumaneka kwiindwendwe nge-whatsapp nangezwi lokufowuna kungekudala emva kokuba ukubhukisha kuvaliwe. Ngexesha lokuhlala kwakho, uza kusoloko unxibelelana nondwendwe ukuze ulusebenzele bhetele.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pirajá